Sardinia (Italy): incazelo, indawo kumephu Italy, ezokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Enhliziyweni uLwandle iMedithera kuyinto Sardinia enhle. Italy inezinto eziningi amahle resort endaweni, kodwa lesi siqhingi ekhethekile. Sardinia isehlane elivela ezweni. Lokhu Nook lapho ebusa ubumsulwa acwebile, minyaka yonke budonsa izivakashi ezengeziwe. akakuthandanga emkhathini we isiqhingi ukunambitheka Italian, kuba akhethekile. Sardinia - ukuthi enchanting indawo, isiko ocebile futhi umlando, kolwandle, ukuzijabulisa, indawo ephelele nesokuphumula.
Sardinia (Italy), isenkabeni yoLwandle LwaseMedithera, phakathi Corsica naseSicily. Wabuka siqhingi ufana wembadada omkhulu, ngakho igama lakhe ungwaqa ngegama elithi lasendulo YesiGreki "sandaliotis". Ukuze lingakanani Sardinia iyona enkulu kunazo zonke wesibili emva Sicily. Itholakala km 12 nje kusukela Corsica (France), entshonalanga ezwekazini Italy. Kusukela Appenninskogo nhlonhlo ukuba Sardinia ibanga km 200.
Minyaka yonke engaba yizigidi ezingu-50 izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba iyakwamukela Italy yayo. Sardinia edonsela abahambi nge sezulu nakwezifudumele. Iholidi baye lapha kungaba kusukela ngo-May kuya maphakathi no-November, ngalesi sikhathi kuyagcinwa izimo esihle kakhulu ukubhukuda. Spring lokushisa ungaphakathi uhla + 17-25 ° C, ehlobo zakuqala - + 20-26 ° C, ngoJulayi thermometer antante + 30 ° C. Agasti kubhekwe Le nyanga yaziwa ngokushisa, izinga lokushisa esiqhingini antante + 34 ° C. Ngo September no-October ngo-Sardinia ukuba + 25 ° C.
Nasi emlandweni walesi siqhingi
Sardinia (Italy) hhayi kuphela inama ezimhlophe isihlabathi amabhishi, ulwandle ecacile blue, buka evulekile, kodwa futhi umlando wasendulo. Kuleli zwe, kwakukhona iminonjana yamandulo owayehlala lapha iminyaka 17,000 edlule. Ngemva babo namanje walondoloza Nuraghe - ukwakhiwa ezinkulu omkhulu. Phakathi nale nkathi, baseYurophu ayesahlala emihumeni futhi egqoka izikhumba, futhi inkosi esiqhingini babe onjiniyela kakhulu, ukwenza izibalo eziyinkimbinkimbi zezibalo.
Ososayensi baye ayiphethwe ukuxazulula impicabadala Nuraghe, ngubani futhi indlela yokwakha nabo. Lesi siqhingi kuyinto zemigwaqo yamandulo amakhulu eminyaka lapha ezinqwabelene isipiliyoni kanye nolwazi kubantu ezahlukene.
Sardinia baphile izimpilo zabo, ukuvikela kusuka emhlabeni wonke. Kukhona namanje owandile zezinzalamizi, isiko izakhamizi ahlonishwe, uyaziqhenya sesiko-mpilo labo. Isigodi ngasinye inama imvunulo yayo kazwelonke. Kodwa ungacabangi ukuthi lena ukunganakwa impela futhi uyisidala isiqephu sezwe, lapho Italy kuphela banganikeza. Sardinia has Amahhotela okunethezeka ngengqalasizinda evuthiwe, isevisi eliphakeme. Kukhona boutiques imfashini, ema-disco, zokudla ezibizayo, izinhlelo ukuzijabulisa. Bored esiqhingini ngeke eyodwa.
Abathandi ethule, iholide eziphumulele kunconywa ukuya engxenyeni eseningizimu ye siqhingi. Kukhona amabhishi ezinhle kakhulu eside amabili egolide nomhlophe isihlabathi emihle, asolwandle oluluhlaza ecacile. South ngokuyinhloko imibhangqwana ukuhamba nezingane, abadala, kanye imibhangqwana ngothando efuna zobumfihlo. Sardinia inikeza zikanokusho 5-star hotel ngemisebenzi emihle, izinhlelo ukuzijabulisa. Ungakwazi umnotho futhi uphumule induduzo ezindlini zabazalwane, njengokungathi sijabulela indawo enhle enhle, bheka izindawo zokungcebeleka.
Ethandwa kakhulu phakathi izivakashi kukhona Cagliari, Santa wang di Pula, Villasimus, Kia, Costa Rei futhi Teulada. Cagliari ekahle abathandi ubudala, labo abanesithakazelo emlandweni, imivubukulo. Isiqhingi Sardinia e-Italy uqhosha eziningi ezikhangayo. I sokuqondisa Cagliari has a umbhoshongo ephakathi inqaba, emigwaqweni emincane, amanxiwa asendulo, izivikelo waseCarthage, le Archaeological Museum, i-elivulekile lemidlalo lamaRoma, lenqwaba ezigodlo namathuna amasonto. Futhi kule ndawo yeholide kungabonwa ogwini pink Flamingo.
Santa wang di Pula idume emabhishi ayo sandy, uphayini zamalala, ulwandle ecacile blue. Lokhu resort kufanelekile imisebenzi yangaphandle ngoba inikeza zonke izimo ngenxa yokuqhuba igalofu, ibhola lomphebezo, ihhashi ogibele namanzi ezemidlalo. Kia Ray Costa, Villasimus, Teulada efanelekayo abatshuzi, ungabona imikhumbi, simazi kangcono izwe ngaphansi kwamanzi.
Umbuso wasenyakatho ingxenye yesiqhingi
Sardinia Imephu Italy unendima ehloniphekile, ke iyisiqhingi ngobukhulu Mediterranean, ngakho kukhona zokungcebeleka eziningi kangaka. Enyakatho, yalondolozwa indlela wezinzalamizi zokuphila, kodwa ngesikhathi esifanayo ziningi izikhungo ukuzijabulisa, evuthiwe ingqalasizinda izivakashi. Kule ngxenye lesi siqhingi nature enhle kakhulu, abahambi bakhangwa entabeni landscape, aquamarine crystal ulwandle ecacile, amabhishi ahlanzekile isihlabathi esihle emhlophe. Enyakatho Sardinia bagxila amahle kakhulu futhi abacebe resort amadolobha.
Isola Rossa kufanelekile lokudoba. Leli dolobha etholakala eduze okudotshwa basendulo. Izakhiwo lapha zakhelwe egwadle abomvu. Ngo Isola Rossa ungakwazi ukuqasha isikebhe futhi bachitha izinsuku ezingu lonke kwi uhambo yokudoba. Santa Teresa Gallura itholakala Awukude Corsica. Kuyinto enhle kakhulu, umcabango emangalisayo azure kolwandle, amatshe, okusikhumbuza isilwane Silhouettes. The yokungcebeleka inikeza eziningana izinkambo kanye nokuvakashela izindawo, ungakwazi ukuqasha izikebhe, vakashela esikoleni diving.
Umzana Stintino ukuba Castelsardo uphosa grottos, nasemihumeni, emhlophe isihlabathi amabhishi, emaweni anezinguzunga zamadwala, coves ethokomele. Kuba bezimo izindawo romantic ezithatha yisibalo esikhulu sabasebenzi esingakaze izivakashi. Kukhona zombili ezihehayo zomlando namasiko, kanye nokuzijabulisa, ingqalasizinda.
"Emerald Coast" - ucezu ipharadesi ukuthi angaletha abahambi esiqhingini Sardinia. Italy (izithombe zalezi zindawo kwenza ukuwa in love with resort shazi) enza konke ukwenza izivakashi zizizwe zikhululekile, waba ukuphumula okuhle, bathole amandla namakhono nakho ezintsha. Costa Smeralda edonsela sokunethezeka, service lihle, ukuzijabulisa kakhulu. Kulapha eholidini ukuza osopolitiki, le oligarchs, pop izinkanyezi, amabhayisikobho kanye nemidlalo. Ema-disco, ebusuku amaqembu, yezikebhe ezimhlophe, boutiques ezibizayo ngeke bavunyelwe ukuba ngizithola, nehlane ukukhuthaza ukuphumula lamabutho kuzo zonke izinkinga.
Bonke labo abafisa ukunikela Sardinia (Italy) iholide ngesikhathi zokungcebeleka ohlonishwa kakhulu eYurophu. Ngokwesibonelo, e Porto Cervo yemihlangano wabeka-back zasemsebenzini. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo resort singaba cocktail amaqembu endaweni okuphumuzayo ukuxazulula zonke izinto ezibalulekile. ogwini olunesihlabathi esimhlophe, crystal ulwandle ecacile, lenqwaba boutiques, zokudlela kanye nezitolo ngeke bavunyelwe ukuba miss. Porto Rotondo - iyona zikanokusho kunazo futhi kuyabiza resort ogwini. Lena yindawo enhle ngoba abatshuzi, kanye ekilasini abathandi "okunethezeka" amahhotela. E Baia eSardinia eziningi zokuzijabulisa lapha athuthukiswe endaweni izivakashi, zokudla eziningi kanye amathilomu, kukhona epaki amanzi.
Izinto okumele uzenze esiqhingini?
Sardinia (Italy) izibuyekezo ezivela abahambi wathola omuhle kuphela. Futhi iyiphi enye indlela, ngenxa yokuthi leso siqhingi cishe ezulwini khona emhlabeni. kwenkundla Obumangalisayo, ulwandle ecacile blue, ogwini olunesihlabathi esimhlophe isihlabathi esihle abushelelezi, ingqalasizinda ezinhle, nasezingeni eliphezulu of service - konke lokhu kunomthelela yokuthi abantu abafika lapha kanye, ubuye kaningi. Sardinia inikeza eziningi zokuzijabulisa yonke ukunambitheka. abantu abasebenzayo uyoba nesithakazelo emanzini futhi ukugibela ihhashi, ukudlala ithenisi, igalofu. Kukhona isikole scuba diving kukhona yezikebhe aqashiwe nezikebhe. On epaki amanzi isiqhingi, ema-disco, ebusuku amaqembu, inikeza isibalo esikhulu sezithunjwa hambo. Abathengi boutiques evulekile imfashini, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo kanye nezitolo ezinkulu. Sitolo sekudla lokuphekiwe nezindawo zokudlela ezinhle ukunikela lenqwaba izitsha. Bored esiqhingini sengathi akekho eyodwa.
Ngosile phezu komlilo inyama okukhululekile izinongo, isinkwa, pasta, kwasolwandle, ushizi, amaswidi, iwayini - lena isidlo esikhulu, lapho esiqhingini idume. Sardinia (Italy) eminyaka amaningi akhiqizwa ushizi, kukhona izinhlobo eziningi. A indima evelele ekhishini inikezwe ngosile inyama ukushisa, ngokuvamile wabhaka ngokuphelele namathe ne ukwengeza laurel umbomvana. Kuwufanele ride on izifunda balesi siqhingi futhi zama isinkwa, yimuphi umuzi kukhona iresiphi for lo mkhiqizo.
Ngo-Sardinia kakhulu othanda amaswidi, ngokuvamile senziwe ngofulawa, uju, amaqanda nama-alimondi. Sitolo sekudla lokuphekiwe etotoswa izivakashi zikanokusho kwasolwandle izitsha, njengoba amaNtaliyane uthande pasta esakhiwe oyster noma sea urchin zidla. Phakathi naso sonke isiqhingi kufanele nakanjani sizame iwayini wendawo - abayikho saphezulu.
Magic Island Sardinia
Italy (isithombe amasayithi ungavumeli ukungabaza ubuhle bakhe) iyipharadesi izivakashi. Leli zwe ekwamukeleni ngonyaka uthola inombolo enkulu lezihambi. Sardinia - ke ingenye iziqhingi ezinhle kakhulu iMedithera. Excellent ezokungcebeleka izikhungo, nature enhle, eziningi ezihlukahlukene zokuzijabulisa, izinto ezithakazelisayo ukwenza lesi siqhingi omunye zokungcebeleka engcono e-Italy.
Izindawo ezithakazelisayo kakhulu eJapane travel ezimele
Shenzhen (China) - isimangaliso kwezomnotho wezwe
Isizini eVietnam. Vietnam samaholidi. Phumula eVietnam ngo-May
Kama Glade. Kama Glade - ikhadi. Nizhnekamsk, Kama Glade
Nogologo Dagestani ayedumile emhlabeni
Iyiphi indima udlalwa Euro Truck Simulator 2 imali futhi kanjani kubo
GDR izimoto hereon
Amnandi Futhi okunempilo ukuvunwa: isaladi Kuban ebusika
Imitha inhlabathi asidi umswakama wokuqukethwe: isimiso ukusebenza, onobuhle ezithandwayo
Indlela ukukhulisa elithwala umoya-mpilo: ukudla, abantu, izidakamizwa
A. Ostrovsky "Ukuduma". izici Kudryash
Phezani ukwenza njengamanje: 20 ubuhle-amaphutha
Anxiolytic futhi imisipha relaxant ejenti "Elzepam": yokusetshenziswa
"Pinosol" (spray): yokusetshenziswa, ukwakheka, izinkomba kanye nokubuyekeza
Engelmann sonwele: incazelo kanye nezithombe
Indlela yokwenza ezinweleni